Uyenza njani -Ikaro
yokuqalisa >> Cómo hacer
Ungayenza njani i-DIY okanye uyenze ngokwakho yindlela yobomi.
Yenza izinto ukusuka ekuqaleni, uhlengahlengise kwaye uqhekeze esele zikhona, uphinde uzisebenzise kwaye uphinde uzisebenzise kwakhona kwizinto ezahluke ngokupheleleyo kwinto eziyilelwe kwaye esingazange sicinge ukuba zinokusetyenziswa.
Indlela yokwenza ingcinga esulungekileyo, ubuchule, umdla.
Jonga iitutorials zethu zokwenza kunye ne-DIY
Kweli nqaku ndiza kulichaza indlela yokuchitha amanzi ngeendlela ezahlukeneyo. Siza kubona kwakhona ukuba yintoni amanzi adibeneyo, ukusetyenziswa kwawo kunye nomahluko kunye nezinye iintlobo zamanzi.
Ukuze siqonde kakuhle inkqubo yokukhutshwa kwamanzi kufuneka siqonde ukuba yintoni amanzi adibeneyo.
Mamanzi amisiwe Ngamanzi apho ubumdaka kunye neeyoni kunye neetyuwa ezikuwo zisusiwe.
Indlela yokuchitha amanzi
bonke iindlela zisekelwe kwidistillation yamanzi, oko kukuthi, ekujikeni kwayo nasekujikeni kwayo okulandelayo.
I-Distillation yinkqubo yokwahlukana, kodwa kukwahlukana ngokomzimba, AKUKHO ukusabela kweekhemikhali.
Uyenza njani iphepha lobugcisa
Masicacise indlela yokwenza iphepha lobugcisa ngemikhombiso kaJan Barbé owenza iphepha lobugcisa ngendlela enobungcali. Ungayenza ekhaya ukuba uyafuna kwaye uyibize iphepha lasekhaya kodwa. Inyani yile yokuba kuyimangaliso yokwenyani ukuba iyichaza njani yonke le nkqubo, indlela kunye nezizathu.
Ndithatha ezona zimvo ziphambili kwividiyo kwaye ndongeza izichasiselo ezizezam. ngaphezu kwako konke ukuthelekisa le nkqubo kunye nokwenziwa kweWashi.
Ndiyathemba ukuba ividiyo ikwi-Intanethi ixesha elide, kodwa ukuba ilahlekile ubuncinci bokuboniswa kuya kuhlala kunjalo.
Emva koku, kufuneka siqale ngokwenza iphepha lethu lemisebenzi eyahlukeneyo ye-DIY kunye nezixhobo ezahlukeneyo.
Iyakuthanda, Washi, iphepha lobugcisa laseJapan kunye namanqaku ethu nge Indlela yokusebenzisa iphepha kwakhona
Uyenza njani isofa kwiipelethi
Ehlotyeni sitshintshe isofa endala ebesinayo enye esiyenzileyo kwiipelethi. Inyani yile yokuba ibingeyonjongo yam, umbono, umnqweno kunye nomsebenzi zibekwe ngumfazi wam. Ngeli xesha ndizinikezele ekuhambiseni iipelethi ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye nokulala phantsi ndilale kanye xa ndidibene.
Iisofa zePallet zisefashini. Zinomtsalane, zintle, kulula kakhulu ukuzakha kwaye zilungele ithala kunye negadi. Zixhaphake kakhulu ukuba bathengisa ikiti ukuyinyusa okanye ii-cushion zesiko.
Sikhethe eyona ndlela ilula yokwenza. Kukho umahluko omkhulu kwiisofa zeepallet, kodwa oku kulula kakhulu.
Sinamacandelo aliqela ngalo mbandela I-DIY kunye neepelethi y Ifanitshala eneepelethi
Makhe sibone indlela yokwenza oku kulula Ikati yabantwana eyenziwe ngeempahla zokunxiba kunye neinti zeayiskhrim. Yenzelwe abantwana. Ukuchitha ixesha kunye nabo besakha kwaye sidlala ukumiliselwa kweentlobo ezahlukeneyo ze-projectiles.
Siza kuthatha ithuba lokuchaza iikhonsepthi ezahlukeneyo kunye nedatha malunga neekhathalogu kwimbali nakwiimfazwe ngokuxhomekeke kubudala bomntwana.
Ndizokufundisa ukuba wenze idreyini elula kakhulu kodwa esebenzayo yeefomsile zekofu. Ilula kakhulu kangangokuba bendizibuza ukuba ndenze isifundo okanye hayi, kuba ayisiyinyathelo ngenyathelo, linyathelo elinye. Kodwa ndiyazithanda izisombululo zemihla ngemihla ezinokuthi zenziwe nangubani na ngezinto zemihla ngemihla.
Kodwa okucacileyo kukuba wonke umntu onekofu eyingqokelela yecapsule, kwimeko yam iDolce Gusto, akakwazi ukuphosa i-capsule kudoti ngezizathu ezahlukeneyo. Kungenxa yokuba siyangcolisa kwaye ngenxa yokuba ikhupha kancinci kancinci kwaye inkunkuma iyavuza kuwe.
Ukuba ungumlimi wekofu unokuba nomdla kula manqaku mabini endlela yokwenza ioasters zekofu
Ikofu yekhofi enomatshini wokuhlamba
I-roaster eyenziwe ekhaya ngembiza
Amaqhinga kunye neehacks zokuthatha iifoto
Ndizifumana Iifoto zikaCooph zikhohlisa ividiyo Kwaye ukutsala umsonto ndiphela ndibhalisela yakho Youtube isiteshi kwaye emangalisiwe kukulula kwamaqhinga awasebenzisayo kunye neziphumo abazifumanayo.
Oko kusifundisa kona kukufumana iziphumo ezimangalisayo Ubuganga bokuzama izinto ezintsha kunye nomfanekiso ngqondweni omninzi. Nangona kunjalo, ekugqibeleni ndicinga ukuba iziphumo ezifunyenwe ekusetyenzisweni kweendlela ezifanayo ezisetyenziswe yingcali kunye ne-amateur ziya kuba zintle. Ndicinga ukuba oku kuya kunika uluhlu lwe «kulindelwe / kuyinyani» esithanda ukubona kakhulu
Kwaye sithatha ithuba lokudibanisa zonke zethu Izifundo ze-DIY Kwicandelo elinye elinamanqaku ama-4 e Imifanekiso ye-DIY, Kodwa sele sinamaqhinga ambalwa kuluhlu.
Uyenza njani into yokuba wenze i-dehumidifier eyenziweyo
Izinto ezilula ezenziwe ekhaya, ngaphandle kwe-elektroniki okanye iindlela. Masenze isixhobo sokususa ubushushu ukuze ubambe ukufuma ukusuka kumagunjana ethu, amagumbi okanye naphina apho sifuna khona.
Singathetha ngeendlela ezi-2 zokungabinazisihlabo:
Iisiccants ezisebenzisa i-silica gel
Ngecompressor kunye ne condensers
Isixhobo sokucoca isixhobo sokucoca ulwelo
Sithetha ngendlela yokufuma okuncinci, efanelekileyo kumagunjana kunye nezithuba ezivaliweyo.
Ayililo ichiza elichanekileyo, isinceda nje ukuba sibe nendawo eyomileyo.
Kwizithuba ezincinci, kwizikhongozeli
Andazi ukuba uyayazi na, kodwa iivenkile zeentsimbi kunye nezitolo eziphezulu zithengisa iibhokisi zeplastiki ezifunxa ukufuma.
Uyenza njani yakho imagi yebhiya yeViking
Ngaba uyi-cervercero? Ewe, oku akunakuphuthelwa endlwini yakho. Kwaye ukuba awunguye, sisipho esifanelekileyo, esenziwe ngezandla zakho ... Masibone Uyenza njani imagi yebhiya yeViking.
I "Viking" yile nto ithethwayo andiqinisekisanga ukuba iiVikings zibenze njalo. Kodwa sithatha ilayisensi kuba ilungile kakhulu, ilungile i-DIY ngaphandle kwemiyalelo.
Ijagi yenziwe ngeplanga elikhuni kunye nezixhobo ezisisiseko, izembe kunye nemela. Umthi okhethiweyo ube yi-elderberry. Xa ukhetha umthi, kubalulekile ukuqwalasela ingqolowa kunye neenkozo zomthi. Ukuze kungabi yimithi yamaqhina kodwa yeenkozo ezintle kunye nemithambo ehambelana nayo, eya kwenza ukusika kube lula kakhulu.
Indlela yokwenza wosula usana
Ukuba ungumzali uza kuyisebenzisa wosula umntwana Kwaye yenye yezo zinto ukusukela kuvavanyo uyazi ukuba uya kuqhubeka uzisebenzisa ngonaphakade.
Ndizisa isifundo kwi ukwenza iipeji ezimanzi, esinokuzisebenzisa kakuhle nosana lwethu okanye ukusetyenziswa kwekhaya. I-DIY ye «caserotes».
Iisuli esizifumeneyo zixabiso eliphantsi kakhulu, nangona kuya kuba nzima ukubuyisela ezorhwebo ngezi, kuyinyani ukuba ukuba uphelile kwaye iivenkile zivaliwe okanye uthathe uhambo okanye umntwana wakho unohlobo oluthile ye ukunganyamezelani kweekhemikhali ezifumaneka kwimisonto yorhwebo, emva koko esi sifundo sinokukunceda.
Ungayifaka njani ekhompyutheni incwadi
Sobona indlela yedijithali yencwadi ngendlela ekhawulezayo kakhulu neyasekhaya.
Ukwenza idijithali kwincwadi kuhlala inamalungu ama-2, eyokuqala apho ufumana khona umfanekiso wesicatshulwa kwaye okwesibini apho lo mfanekiso uphathwa khona nge I-OCR, un Isoftware yokuqonda ubuntu
Ngokwesiko, iincwadi zazifundwe ngephepha ngalinye, le yinkqubo ecothayo eyayintsokothile ngenxa yeentsika zeencwadi, ezazigobele amaphepha emva koko i-OCR ingawazi kakuhle amagama. Kwaqatshelwa ukuba abantu abaninzi bangabopheleli kubo ukuze baququzelele inkqubo yokuskena.
Iphepha1 Iphepha2 ... Iphepha11 Elandelayo →